Nhau - Ndinofanira Kusarudza Production Line kana Turnkey Project Ye IV Solution?
Ini ndinofanira Sarudza Yekugadzira Mutsara kana Turnkey Project Ye IV Solution?
Mazuva ano, nekuvandudzwa kwetekinoroji uye nemararamiro ehupenyu, vanhu vanowedzera kutarisisa hutano hwavo. Saka kune shamwari dzakawanda kubva kumabhizinesi akasiyana siyana, vane tarisiro huru nezveye indasitiri yemishonga uye vanoda kuisa mari fekitori yemishonga, netarisiro yekupa zvipo kuhutano hwevanhu.
Naizvozvo, ndakagamuchira mibvunzo yakawanda yakadai.
Nei zvichitora mamirioni emadhora emadhora kuchirongwa chemushonga wemushonga IV?
Nei imba yakachena inoda kuve 10000 sq ft?
Mushini uri mubhurocha hauite kunge wakakura kudaro?
Ndeupi musiyano uripo pakati pe IV mhinduro yekugadzira mutsara uye chirongwa?
Shanghai IVEN inogadzira mitsara yekugadzira uye zvakare inoita mapurojekiti ekeykey. Kusvika parizvino, isu takatumirwa kunze kwemazana emitsara yekugadzira uye 23 turnkey mapurojekiti. Ndinoda kukupa ipfupi sumo yeprojekti uye yekugadzira mutsara, kubatsira vamwe vatsva vatyairi kuti vanzwisise zvirinani kugadzirisa pasi fekitori yemishonga.
Ndinoda kutora iyo PP bhodhoro iv solution glucose semuenzaniso, kukuratidza izvo zvinofanirwa kutariswa kana uchida kuseta fekitori nyowani yemishonga.
Iwo map mabhodhoro iv mhinduro anoshandiswa zvakanyanya mune yakajairwa munyu, glucose nezvimwe jekiseni munda.
Kuti uwane bhodhoro rakakodzera reglucose pp, maitiro acho anotevera:
Chikamu 1: Kugadzira mutsetse (Isina chinhu kugadzirwa kwebhodhoro, Kushambidza-Kuzadza-Kuisa chisimbiso)
Chikamu 2: Kurapwa kwemvura system (tora mvura yejekiseni kubva kumatepi mvura)
Chikamu 3: Solution kugadzirira system (kugadzirira glucose yejekiseni kubva kumvura yejekiseni uye glucose mbishi zvinhu)
Chikamu chechina: kubereka (sterilize iyo bhodhoro izere nemvura, bvisa iyo pyrogen mukati) kana zvisiri, pyrogen inotungamira kufa kwevanhu
Chikamu 5: Kuongorora (kuvuza kwekuvheneka uye zvidimbu mukati mekuongorora mabhodhoro, kuve nechokwadi kuti zvigadzirwa zvakapedzwa zvinokodzera)
Chikamu 6: Kupakata (kunyora, kupurinda batch kodhi, kugadzira zuva, zuva rakapera, isa mubhokisi kana katoni nemanyowani, zvigadzirwa zvakapedzwa mukuchengetedza zvekutengesa)
Chikamu 7: Kamuri yakachena (kuverengera tembiricha yemusangano, hunyoro, yakachena seGMP chinodiwa, madziro, siringi, pasi, mwenje, madhoo, pasipoti, windows, nezvimwe zvese zvinhu zvakasiyana kubva kushongedzo yako yekumba.)
Chikamu 8: Zvishandiso (air compressor unit, bhaira, chiller nezvimwewo Kupa kudziyisa, kutonhora sosi yefekitori)
Kubva pane ino chati, iwe unogona kuona, iyo PP bhodhoro yekugadzira mutsara, chete mashoma mashoma mune yakazara chirongwa. Mutengi anongoda kugadzirira pp granule, tobva tapa iyo pp bhodhoro yekugadzira mutsara, kuti uone pre-fomu jekiseni, jekiseni jekiseni, pp bhodhoro ichivhuvhuta, kuwana isina chinhu bhodhoro kubva pp granule. Wobva wageza bhodhoro risina chinhu, uchizadza mvura, uchivhara makapisi, ndiwo maitiro akazara etsetse yekugadzira.
Yezve turnkey projekiti, fekitori dhizaini yakakosheswa yakagadzirirwa, dzakasiyana dzakachena kirasi nzvimbo ine kusiyanisa kumanikidza, mune tariro yemweya wakachena unongoyerera chete kubva Kirasi A kusvika Kirasi D.
Heano marongero emusangano kune ako mareferensi.
Iyo PP bhodhoro yekugadzira mutsara nzvimbo ingangoita 20m * 5m, asi iyo projekiti yemusangano iri 75m * 20m, uye iwe unofanirwa kufunga nezvenzvimbo yeirabhorari, imba yekuchengetera mbishi zvinhu uye zvigadzirwa zvakapedzwa, hazvo inenge 4500 sqm.
Paunenge uchizogadzira fekitori nyowani yemishonga, iwe zvakare unofanirwa kufunga zvinotevera zvinhu:
1) Fekitori kero kusarudzwa
3) Invest capital uye 1 gore kumhanya mutengo
4) GMP / FDA yakajairwa
Kuvaka fekitori nyowani yemishonga, Hazvina kuita sekutanga bhizinesi idzva senge chicherwa chemvura yemaminera, chirimwa cheuchi. Iyo ine zvinyatso kuomarara uye iyo GMP / FDA / WHO zviyero mamwe mabhuku. Zvinhu zveimwe purojekiti zvinotora zvinopfuura makumi matanhatu zvidimbu zvemakumi mana emidziyo, uye vanopfuura makumi mashanu vashandi, avhareji 3-6 mwedzi panzvimbo yekumisikidzwa, kugadzirisa, uye kudzidziswa. Iwe unofanirwa kubata nevatengesi vazhinji, kutaurirana iyo chaiyo yekuendesa nguva zvinoenderana nechirongwa chirongwa.
Chii chimwezve, panofanirwa kuve nehumwe kubatana / micheto pakati pevaviri kana vanopfuura vatengesi. Maitiro ekuisa mabhodhoro kubva sterilizer kuenda kubhandi usati wanyora?
Ndiani achange aine chekuita nemazita asiri kunamira pamabhodhoro? Kunyora mutengesi wemuchina anozoti, 'idambudziko rako remabhodhoro, mabhodhoro mushure mekuvharisa haana kunyatsokwana kutanda tsvimbo.' Sterilizer mutengesi achati, 'hazvisi zvedu, bhizimusi redu kubvisa uye kubvisa iyo pyrogen, uye isu takazviwana, izvo zvakakwana. Ungashinga sei kuti utore sterilizer mupi anotarisira nezve dhamu dhizaini! '
Vese vatengesi vakati, ndivo vakanyanya kunaka, zvigadzirwa zvavo zvinokodzera, asi pakupedzisira, haugone kuwana zvigadzirwa zvinokodzera pp bhodhoro glucose. Saka, chii chaungaite?
Cask dzidziso - - iyo cubage yecask inoenderana nekapfupi huni ndiro. Iyo turnkey chirongwa ikasi hombe, uye inoumbwa nemazhinji akasiyana anotyisa mahwendefa emapuranga.
IVEN Pharmaceutical, semuvezi, iwe unongoda kubatana neIVEN, tiudze chako chinodikanwa, senge 4000bph-500ml, isu tichagadzira iyo cask, mushure mekusimbisa newe, 80-90% zvigadzirwa zvichagadzira, 10-20% zvigadzirwa ichabuda zviwanikwa. Tichaongorora yega yega ndiro mhando, kuona kubatana kwese ndiro, kuita iyo purogiramu nenzira, kuti ikubatsire kuona muyedzo uchigadzira munguva ipfupi.
Kazhinji kutaura, pp bhodhoro yekugadzira mutsara, ndechimwe chezvikamu zvikuru zveprojekti. Kana iwe uine ruzivo rwekuronga zvese, uine nguva nesimba rekugadzirisa matambudziko ese iwe, unogona kusarudza kutenga mitsara yekugadzira zvakasiyana sezvaunoda. Kana iwe usina ruzivo, uye uchida kudzorera mari kumashure, ndapota vimba nechirevo: Nyanzvi inobata zviitiko zvehunyanzvi!
IVEN ndiye mumwe wako nguva dzese!
Post nguva: Aug-03-2021
Disposable Syringe & Tsono Production Line, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Muchina À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer,